Mailtrack: Sochie Gmail gị Na-emeghe iji ngwa mgbakwunye Chrome a Martech Zone
Thursday, July 3, 2014 Tọzdee, Nọvemba 6, 2014 Douglas Karr
You nwetụla mgbe ị na-eche ma mmadụ emepere email ị zitere site na iji Gmail? Can nwere ike iji Mailtrack ime nke ahụ. Mailtrack bụ ngwa mgbakwunye Chrome na-agbakwunye pixel nsuso na ozi gị na-apụ. Mgbe onye nnata gị meghere email gị, a na-arịọ ihe oyiyi ahụ ma Mailtrack debara aha ya emeghe, na-egosi na a hụla ya na akara ngosi na interface Gmail gị.
Nke a bụ ngwa dị mfe ma dị irè nke na m chọrọ ka ndị ahịa email ọ bụla tinye ya na nyiwe ha. A na-eziga ozi ịntanetị niile ma hụ na usoro HTML n'oge a, yabụ ọ bụ azịza dị irè. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa na-eji Outlook, ọ na-egbochi ma ọ naghị agbadata ihe oyiyi na ndabara ka ị ghara ịdebanye aha ahụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mmadụ mere.
Mailtrack nwere interface dị mfe iji hụ ihe mepere ma gụọ ozi ịntanetị.
Gmail kwesịrị ịzụrụ ngwa a n'aka ndị folks a ma tinye ya n'ime ikpo okwu ha yana API usoro iji jiri ndị ahịa. Onye ahịa email na-abụghị nchọgharị Chrome gị agaghị etinye pixel nsuso.
Tags: Gmailgoogle ngwa mailMailtrackemail mepeetrack emepepixel nsochi
Nke ahụ bụ ndọtị dị jụụ, mana enweghị m mmasị na mgbasa ozi na mbipute n'efu. Enwere uzo ozo n'enweghi mgbasa ozi obula - https://deskun.com/, lelee ya.